OMG Hidden SPY Vehicle / Tracker GPS Magnetic Fiara [GPS013D] | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
OMG fiara miafina / OMC Magnetic GPS Tracker OMG miafina
OMGGPS013D Spy Hidden Car GPS Tracker izay miasa mifototra amin'ny tambajotra GSM efa misy sy satelita GPS, dia afaka mamantatra sy manara-maso izay kendrena rehetra avy lavitra amin'ny alàlan'ny SMS, APP finday ary rindrambaiko fanarahana tranonkala! Izy io dia mandray ny haitao mandroso indrindra amin'ny GPS, Google Map, Wi-Fi ary fametrahana toerana roa an'ny LBS. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny andriamby mahery ao anatiny, dia azo apetraka mora foana sy mafy amin'ny fiara, kamio ary izay kendrena rehetra misy ifandraisany amin'ny vy. Inona koa, manohana ny 3G GSM 850/900/1800 / 1900Mhz izy io, afaka miasa tanteraka manerantany!
Asa an'ny gps fiara mpandeha
Tohano ny karatra SIM Siming Singapore 3G sy 4G
Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena misy amin'ny fampiharana (IOS & Android), sms ary sehatra web
Fanaraha-maso lavitra (Spy - microphone manorina, avelao ny resaka ambadika)
Long battery life standby 2-3 Weeks
Mamaloha sms amin'ny rohy Google eo amin'ny finday
Geo-fefy, alam-baraka, alam-baratra
Mandritra ny famonoana herinaratra (3 karazana fomba fiasa)
Build-In 5 Power magnets
WIFI Location (Safidy)
Esory ny Alarma (Ampiasaina ao amin'ny fiara ny fitaovana, Halefa ny Alert)
Track Vehivavy fiarakodia / Fanofana fiara / fitaovana ivelan'ny ets
Fomba fiasa lehibe momba ny vokatra:
GPS + LBS Dual Positioning Way: Raha tsara ny fambara gps, dia hahita amin'ny alàlan'ny satelita GPS ny fitaovana, raha tsy izany dia hahita ny alàlan'ny LBS ny fitaovana! Amin'ny alàlan'ny modely GPS valiny, ny marina dia 5-10 metatra, eo ambanin'ny làlan-java-misy ny LBS, ny marina dia 100-2000 metatra.
Fikarohana valiny: Azonao atao ny manara-maso ny réaltime arahin'ireo sarintany ao amin'ny google amin'ny alàlan'ny telefaona, takelaka ary solosaina, ary ny elanelan'ny famoahana data minumum dia segondra 10.
Playback Route History: Ny APP sy ny mpizara tranonkala dia afaka mirakitra ny angon-drakitra misintona ny fitaovana hatramin'ny 6 volana, azonao atao ny miverina mandehandeha amin'ny làlan-tantara na oviana na oviana.
Fotoam-piasana maharitra: Efa nanangana bateria 3.7V 20000 mAh / 10000mAh Li-ion, ny ora fijanonana dia tafakatra hatramin'ny 240 / 120 andro ary ny andro fiasana dia hatramin'ny 20-30 andro;
Magnetika mahery: Fanamboarana haingam-pandeha mahery vaika, dia azo apetraka mora foana.
Waterproof IP67: Ny haavon'ny rano amin'ity fitaovana ity dia IP65, afaka manohitra ny sombin-drano izany kanefa tsy azo atao anaty rano.
Feo tsara fanaraha-maso: Alefaso aloha ilay fitaovana "Monitor + tenimiafina", dia hovana ilay fitaovana Mode Monitor, ankehitriny raha miantso ny nomeraon SIM amin'ny fitaovana ianao dia alaivo mandeha ho azy ilay antsoinao ary azonao atao ny manara-maso ny feo manodidina ilay fitaovana!
Overspeed Alarm: Ity fanairana ity dia tsy misy afa-tsy eo amin'ny fomba fiasa maharitra.Rehefa mihoatra ny hafainganam-pandehanana nivezivezy anao ny hafainganam-pandeha dia handefa hafatra "fanairana haingana!" Amin'ny laharan'ny admin isaky ny minitra 5.
Alarm alarm: Taorian'ny nanaovanao ilay fampandrenesana fanairana fanazaran-tena, dia miangavy anao hitazona ny mpitety ho mijanona mandritra ny minitra 5, aorian'ity fiasa ity dia manomboka miasa. Handefa SMS "alarm alarm!" Amin'ny nomerao admin izany raha taitra ny unit.
Fanairana Hetsika: Rehefa mijanona tsy mihetsika ao amin'ireo toerana mandritra ny minitra 10 ny vondrona dia afaka mametraka ny fanairana ny hetsika amin'ny alàlan'ity didy ity hoe "move + passord", raha toa ka nifindra 500m ilay fitaovana dia handefa fampandrenesana SMS "Alaovo ny Alarm + Latitude ary longitude" ny isa nahazoana alàlana.
Geo-fefy: manangana geofence ho an'ny tracker hametra ny hetsiny ao anatin'ny distrika iray. Handefa fampahalalana fanairana ho an'ny APP sy mpizara tranokala ny unitana rehefa mivoaka na tonga eto amin'ity distrika ity.
Fahazavana fanairana: misy sensor fanonganana anti-fanesorana eo amin'ny lafiny ivon'ny fitaovana. Raha tsy voarakotra indray io sensor induction io, ny fitaovana dia handefa "Fanafahana fanairana!" Amin'ny laharana admin sy nomerao SOS amin'ny SMS.
Tadiavo ny fanaraha-maso PC sy ny fampiharana fanaraha-maso amin'ny smartphone.
lafiny: 120mm X 65mm X 50mm
GPS fahatsapana: -159dBm
GPS marina: 5m
Fotoana hiatrehana aloha
Toetrandro hafakely 35s
Wall charger: 110-220V fahan'ny 5V output
Battery: Fiatrehana azo ovaina 3.7V 10000m Ah Li-ion batterie
Miato: 2 ho 3 herinandro
Storage Temp -40 ° C hatramin'ny + 85 ° C
Operation Temp -20 ° C hatramin'ny + 55 ° C
Humidity 5% –95% tsy misy condensing
OMGGPS13D - Tracker an'ny fiara GPS andriamby - Pikantsary amin'ny finday
OMGGPS13D - Tracker an'ny fiara GPS andriamby - Portal-Base-Portal (tsindrio ny sary raha hijery efijery feno)
OMGGPS13D - Demo Tracker an'ny GPS Magnetic
28697 Total Views 26 Views Today
GPS Tracker Watch ho an'ny ankizy - Waterproof (GPS02W)
Watch OMG GPS Tracker ho an'ny ankizy 10 taona no ho miakatra /…
GPS027W - Fanaraha-maso ny fahasalamana zokiolona OMG GPS Tracker Watch
Watch OMG Tracker ho an'ny ankizy [GPS008W] - S $ 168 (Tsia…
GPS004D - Keychain / Pendant GPS Tracker ho an'ny zokiolona / Ankizy